Adamant - အခမဲ့ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းသောအမည်မသိစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အခြားအရာများ | Linux မှ
ယနေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ထပ် လျှောက်လွှာတစ်ခုအား ဆက်လက်တင်ပြပါမည်။ လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ Linux နယ်ပယ်တွင် လူသိနည်းသော၊ "Adamant".
အခြေခံအားဖြင့်, "Adamant" တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးလျှောက်လွှာ အပေါ်အခြေခံပြီးပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် blockchain နည်းပညာ (blockchainအလှည့်၌, အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်) Crypto ပိုက်ဆံအိတ် (Crypto ပိုက်ဆံအိတ်) y Cryptocurrency Exchange System (Exchange).
"Adamant" ဒါငါတို့ရဲ့စတုတ္ထမြောက်ပဲ လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးလျှောက်လွှာ ကူးစက်ပျံ့နှံ့သည်, blockchain နည်းပညာအောက်တွင်ရည်ရွယ်ချက်များစွာရှိပြီးဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာဤစာစောင်ပြီးဆုံးပြီးနောက်ဖတ်ရန်သင့်အားဖိတ်ကြားသည့်ယခင်ပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းရေးသားခဲ့သည် Juggernaut, Sphinx နှင့်အဆင့်အတန်း. ၎င်းတို့အနက်မှ အောက်ပါတို့ကို အတိုချုံးဖော်ပြပါသည်။
"Juggernaut, Sphinx နှင့် Status တို့သည် blockchain နည်းပညာကိုအခြေခံထားသည့်အတွက်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းဆိုင်ရာ application များသာမကငွေပေးချေမှုအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အကျိုးကျေးဇူးများလည်းရှိသည်။" Juggernaut, Sphinx နှင့် Status: စိတ်ဝင်စားဖွယ်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်များ.
1 Adamant- ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော အမည်မသိစာတိုပေးပို့ခြင်း။
1.1 Adamant ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 အထူးပြု အင်္ဂါရပ်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ
1.2.2 ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းနှင့် Blockchain
1.2.3 Crypto ပိုက်ဆံအိတ်
1.2.4 Cryptocurrency ချိန်းစနစ်
Adamant- ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော အမည်မသိစာတိုပေးပို့ခြင်း။
တိုတိုပြောရရင်၊ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်လျှောက်လွှာကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြသည်-
"၎င်းသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော အမည်မသိစာတိုပေးပို့ခြင်းအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။".
သို့သော် ထုတ်ဝေမှု၏အစတွင် ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြခဲ့သလို၊ လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးလျှောက်လွှာ de open source ဖြစ်ပြီး blockchain နည်းပညာအပေါ်အခြေခံသည် (blockchains) ၎င်းသည် Crypto Wallet အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ (Crypto ပိုက်ဆံအိတ်) နှင့် Cryptocurrency လဲလှယ်စနစ် (လဲလှယ်). ဤသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် အခြားအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ထပ်လောင်းသုံးသပ်ပါမည်။
အထူးပြု အင်္ဂါရပ်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ
အသုံးပြုသူများသည်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုမှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်အီးမေးလ်များသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်များကိုမသုံးပါ။ အသုံးပြုသူ၏စက်ပစ္စည်းအချက်အလက် (လိပ်စာစာအုပ် (သို့) တည်နေရာ) မပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အခြားအသုံးပြုသူများကို IP လိပ်စာဒေတာကိုမပေးနိုင်ပါ။ အသုံးပြုတဲ့ privacy and encryption ယန္တရားတွေဟာအဆင့်မြင့်တယ်။ messaging ယန္တရားသည် Tor Network ကိုအများဆုံးအမည်ဝှက်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၎င်းအားဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသည့်သတင်းစကားသည်အစိုးရများ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့် developer များနှင့်မသက်ဆိုင်သောကြောင့်အကောင့်များကိုမည်သူမျှထိန်းချုပ်နိုင်၊ ပိတ်ဆို့နိုင်သည်၊ ပိတ်ထားနိုင်သည်၊ ကန့်သတ်နိုင်သည်။ စာများအားလုံးကို Diffie-Hellman Curve25519, Salsa20, Poly1305 algorithms များဖြင့်စာဝှက်ပြီး SHA-256 + Ed25519 EdDSA ကလက်မှတ်ထိုးသည်။ လျှို့ဝှက်သော့များသည်အသုံးပြုသောစက်ကိုဘယ်တော့မှမချန်ပါ။ မက်ဆေ့ခ်ျများ၏အစီအစဉ်နှင့်သူတို့၏စစ်မှန်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်သော blockchain platform မှအာမခံသည်။
၎င်းသည်သုံးစွဲသူများအား cryptocurrencies လောကသို့အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်ရန်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုရန် Crypto ပိုက်ဆံအိတ်ကိုပေးသည်။ Bitcoin, Ethereum, Lisk, Dogecoin, Dash နှင့် Stabil Dollar တို့ဖြစ်သည်။ All-in-one access အတွက် passphrase ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်သော့များကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏အဆက်အသွယ်များနှင့်စကားပြောနေစဉ်သို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုကိုတိုက်ရိုက်ငွေလွှဲနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်လည်ပတ်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည့် Bots များအသုံးပြုခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
၎င်းသည်ဖြန့်ဝေထားသောအမည်မသိဖလှယ်မှုစနစ်တစ်ခုကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ယခင်ကသိမ်းဆည်းထားသောနှင့်ကူးပြောင်းခြင်း၊ ချက်တင်စကားပြောခြင်းဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအမည်မဖော်ဘဲအလွယ်တကူဝယ်ယူရန် (ရောင်းရန်) လွယ်ကူစေသည်။
၎င်းသည် Blockchain node၊ ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကောနှင့် client ၏စာတိုပေးပို့ခြင်းအပလီကေးရှင်းများအပါအဝင်အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့် GPLv3 လိုင်စင်ကိုအသုံးပြုသည်။
Linux တွင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်၊ သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အောက်ပါ link ကိုကလစ်နှိပ်ပါ installer ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်အတွက်၎င်း၏တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်တည်ရှိသည်။ « AppImage format »က The လက်ရှိတည်ငြိမ်သောဗားရှင်း (၂.၇.၀)နှင့် နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် သင်တိုက်ရိုက်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ GitHub ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်. ၎င်းတွင် installers များလည်းရှိသည်။ Windows, MacOS, Android, iOS နှင့် Torအွန်လိုင်းဝက်ဘ်လိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြီးတာနဲ့ AppImage အထုပ်၊ ၎င်းကို graphical interface မှတစ်ဆင့်ထည့်သွင်းနိုင်သည်၊ ၎င်းကိုအသုံးပြုသော file manager မှလုပ်ရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီးထိုမှအထုပ်ကို mouse ဖြင့်သုံးနိုင်သည်။ ကွပ်မျက်ခံရသောအခါကကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်ထည့်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်နိုင်သည် စကားဝှက် ကနဦး window မှ ဤအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ပါလင့်ခ်ကို နှိပ်နိုင်ပါသည်။ link ကို.
အပလီကေးရှင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီးသည်နှင့်၊ အောက်ပါအတိုင်းပေါ်လာသည်။ အမြင်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်များ:
တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် "Adamant" စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ဗဟိုမှလက်ငင်းစာပို့ app ကို အမျိုးအစား PWA (Progressive Web Application / Progressive Web Application) ကမ္ဘာကြီးကို ပိုသိလာဖို့ ကြိုးစားရကျိုးနပ်ပါတယ်။ Defy.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Adamant»စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအနည်းငယ်သာလူသိများသည် လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ် အပေါ်အခြေခံပြီးပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် blockchain နည်းပညာ (blockchain) အလှည့်၌, အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည် Crypto ပိုက်ဆံအိတ် y Cryptocurrency ချိန်းစနစ်; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Adamant - အခမဲ့ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောအမည်မသိစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အခြားအရာများ
ထူးချွန်သူနှစ် ဦး သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ရင်ဆိုင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးဆုမှာကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်ဖြစ်သည်